Maamulka Somaliland oo Dowlada Somalia ku eedeeyey inay ka shaqeynayso kala fogaanshaha… – Hagaag.com
Maamulka Somaliland oo Dowlada Somalia ku eedeeyey inay ka shaqeynayso kala fogaanshaha…
Maamulka Somaliland ayaa dowladda Federalka Somalia waxa ay ku eedeysay inay ka shaqeynayso sii kala fogaanshaha Somalia iyo Somaliland, kadib markii arrintaasi uu ka hadlay Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland.
Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon Wasiirka Arrimaha Dibadda ee maamulka Somaliland, oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay marka la eego hab dhaqanka ay wado dowladda Somalia inuu yahay mid dhalinaayo cadowtooyo hor leh oo labada dhinac ay ku kala fogaadaan.
Waxa uu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo Dowladda Somaliya ay ka cunaqabateysay maamulka Somaliland, sidaasi ay tahayna wali ay sii wado waxyaabo sabab u ah in Somaliland ay ku sii fogaato dhibaatadii horay loogu gaystay.
Go’aankii dowladda Somalia ay xiriirka ugu jartay dalka Guinea, ayaa wuxuu ku tilmaamay inay tahay aragti gaaban oo aan aad looga fiirsan.
Wasiirka Arrimaha dibadda maamulka Somaliland, ayaa sheegay haddii dowladda Somalia sidaasi ay ku dhaqanto inay jiri doonaan dalal kale oo xiriirka ay u jaraan, maadaama Somaliland ay la macaamileyso dowladdo hor leh.